Home » Lahatsoratra farany farany » fivoriana » Manokatra ny Forum momba ny fizahantany manerantany any Jakarta ny filaharana manandanja
Birao fizahantany afrikanina • Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao farany momba ny Indonezia • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • People • Tourism • Dinika fizahan-tany
Fihaonana an-tampon'ny mpitarika ny Forum momba ny fizahantany manerantany
Ny Global Tourism Forum (GTF) dia nanokatra ny fihaonamben'ny mpitarika an'i Asia androany maraina tao Jakarta ary mandray andalana manan-danja amin'ireo mpitarika fizahan-tany.
Ny Leaders Summit Asia dia hetsika iraisam-pirenena eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny.
Ny Summit dia mikendry ny hanamorana ny fikarohana fizahan-tany kalitao hizara ny zava-bita sy ny fifanakalozana hevitra eo amin'ny governemanta sy ny tontolon'ny asa.
Global Tourism Forum dia fandraisana andraikitra avy amin'ny World Tour Forum Institute any London.
Ny Leaders Summit Asia dia hilatsaka anio sy rahampitso 15-16 septambra 2021. Sehatra fiaraha-miasa iraisampirenena mifantoka amin'ny famahana ny fanamby ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany. Manambatra ny ezaka iraisan'ny masoivohon'ny governemanta, ny mpandray anjara amin'ny indostria ary ny akademia, ny GTF dia miezaka ny hahatratra ny maodely fampandrosoana maharitra ho an'ny tsena fizahan-tany misimisy, ary koa ny famolavolana paikady hiantohana ny fitomboan'ny fizahantany.
Ny filoha lefitry ny Indonezia, HE Prof. Ma'ruf Amin, izay nanokatra manokana ny Vovonana tao amin'ny Hotel Raffles any Jakarta taorian'ny lahatenin'i Dr. Sapta Nirwandar, filohan'ny fizahan-tany Indonezia; Andriamatoa Balut Bagci, ny filohan'ny World Tourism Forum Institute; ary Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, ny minisitry ny fizahan-tany sy ny toekarena famoronana ao amin'ny Repoblikan'i Indonezia.
Dr. Taleb Rifai, ny sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha ary sekretera jeneralin'ny World Tourism Forum Institute & Patron an'ny Birao Afrikana misahana ny fizahan-tany, dia niresaka tamin'ny lanonana fanokafana ihany koa.
Ny filaharan'ny mpandahateny mahavariana dia misy ny filoha lefitr'i Torkia, HE Fuat Oktay; HE Dato Dato Lim Lim Jock Hoi, ny sekretera jeneralin'ny ASEAN; IZY Andriamatoa Tony Blair, PM taloha tao UK; Alain St.Ange, Minisitry ny fizahantany, sidina sivily teo aloha, seranan-tsambo sy sambo ao Seychelles teo aloha ary filohan'ny Birao fizahantany afrikanina & Sekretera jeneralin'ny FORSEAA, amin'ireo mpandahateny manan-kaja maro hafa. Andiana minisitry ny fizahantany ao ASEAN ihany koa no hanao fivoriana manokana.
Ny toetran'ny fizahan-tany tamin'ny 2021 nantsoin'ny Global Tourism Forum dia ny filohan'ny Repoblikan'i Indonezia.
Forum momba ny fizahantany manerantany mitana andraikitra lehibe ihany koa amin'ny fisarihana ny famatsiam-bola mivantana avy any ivelany amin'ny firenena kendrena, amin'ny alàlan'ny fiasa hamantatra ireo fahafaha-miasa, hampiroborobo ireo hetsika stratejika ary hanomezana fanampiana ireo mpampiasa vola vahiny vonona ny hanome loharano ao amin'ny firenena kendrena.
Nahoana i Indonezia?
Ny fizahan-tany any Indonezia dia ohatra iray lehibe amin'ny fomba fanaovan-javatra tsara. Ny sehatry ny fizahan-tany dia loharanom-bola tena ilaina ho an'ny firenena ary ampahany lehibe amin'ny toekarena.
Indonezia dia voatanisa ho laharana faha-20 mpizahatany manintona indrindra eran'izao tontolo izao ary faha-9 nivelatra haingana indrindra eran-tany tamin'ny taona 2017. Betsaka amin'ireo toerana malaza indrindra eto an-tany no nahita fitomboana lehibe tamin'ny taona 2018, miaraka amin'i Denpasar, Jakarta, ary Batam amin'ireo toerana folo nitombo haingana indrindra, miaraka amin'ny 32.7, 29.2, ary 23.3 isan-jato isan-taona fitomboana mifanaraka amin'izany. Ny indostrian'ny fizahan-tany no laharana fahefatra lehibe indrindra amin'ny habetsaky ny vokatra sy serivisy aondrana.
Ny fitsidihan'ny mpitsidika vahiny any Indonezia dia nitombo 1.9% tamin'ny 2019, tafakatra 16.1 tapitrisa tamin'ny taona 2018. Manodidina ny 9.73 tapitrisa ny mpizahatany vahiny tonga tany Indonezia tamin'ny 2015, nandany 7.5 alina teo ho eo tao amin'ny trano fandraisam-bahiny ary nijanona 7.5 andro teo ho eo. amin'ny $ 1,142 eo ho eo. Tamin'io taona io ihany dia nandany $ 152 isan'andro ny mpitsidika ampitan-dranomasina any Indonezia na $ 152.22 isan'andro teo ho eo. Iray amin'ireo loharanom-pizahan-tany dimy manan-danja indrindra any Indonezia ny Singapore, Malezia, Sina, Aostralia ary Japon.
Laharana faha-40 tamin'ny ankapobeny i Indonezia tamin'ny tatitra momba ny fifaninanana momba ny dia sy fizahan-tany 2019 miaraka amin'ny isa 4.3. Indonezia dia nahazo ny laharana faha-42 amin'ireo firenena 136 tamin'ny fandalinana tamin'ny taona 2017 tamin'ny isa 4.2. Araka ny fanadihadiana, ny indostrian'ny fizahantany any Indonezia dia manana ny laharam-pahamendrehana amin'ny vidiny fahatelo amin'ny firenena 141.